News - Atụmatụ na atụmanya nke nkenke Machinery Parts nhazi
The nkenke machining ụlọ ọrụ mgbe niile a oru-kpụ ọkụ n'ọnụ, isi obodo-kpụ ọkụ n'ọnụ, na technology-kpụ ọkụ n'ọnụ ụlọ ọrụ. Ulo oru nwere oke uzo. Ọbụna ma ọ bụrụ na ụlọ ọrụ izugbe erughị ogo ụfọdụ, ọ ga-esiri ike ị nweta uru. Nnukwu ụlọ ọrụ nwere ike belata ọnụ ahịa site na ị nweta nnukwu ngwaahịa na imepụta, ịhazi azụmahịa, wee wuo ahịa ahịa mpaghara nke na-ekpuchi ngwaahịa sitere na mpaghara na ụlọ ọrụ dị iche iche. Ya mere, nkenke machining ụlọ ọrụ nwere dịtụ ike Hengqiang e ji mara. N'ọdịnihu, ụlọ ọrụ a ga-elekwasị anya na ntinye, njikọta mpaghara, njikọta ụlọ ọrụ na ntinye aka.
N'ime ha, njikọta mpaghara bụ njikọta nke ụlọ ọrụ nhazi nkenke n'otu mpaghara ahụ, yabụ ọ nwere ike ilekwasị anya na itinye amụma na njikwa uru, ma mepụta ezigbo mmekọrịta na mmekọrịta mmekọrịta. Industrial yinye mwekota bụ otu ọrụ n'otu site machining ụlọ ọrụ, ma ọ bụ downstream n'ichepụta ụlọ ọrụ nwere ike na-arụ ọrụ na isi akụrụngwa na-eweta maka idozi teknụzụ kọmpụta na-eche ihu ihe mgbagwoju anya; nhazi njikọta bụ iwebata ndị mmekọ dị ka ụgbọ ala na ndị agha iji ghọta ihe dị mkpa karịa, mepee ngwaahịa ndị ezubere iche, ma belata ọnwụ na-enweghị isi n'oge nyocha na mmepe.
Usoro nke nkenke akụkụ nhazi nwere oke nlezianya chọrọ. A obere akpachapụghị anya n'oge nhazi ga-eme ka workpiece njehie gafere ndị ndidi nso, na ọ ga-adị mkpa ka ibughachi ma ọ bụ ịkpọsa ihicha nke oghere, nke ukwuu enwekwu mmepụta na-eri. Ya mere, taa anyị na-ekwu maka ihe ndị achọrọ maka nhazi akụkụ akụkụ, nke nwere ike inyere anyị aka melite arụmọrụ mmepụta. Nke mbụ bụ nha nha. Jide n'aka na ị gbasoro ụdị na ọnọdụ nnabata chọrọ nke ịbịaru maka nhazi. Agbanyeghi na ihe eji arụ ọrụ ahụ mepụtara ma mepụta ya agaghị adị ka akụkụ nke eserese ahụ, akụkụ ndị dị adị dị na njedebe nke usoro iwu, nke bụ ngwaahịa niile ruru eru ma nwee ike iji ya mee ihe.
Nke abuo, n'ihe banyere akụrụngwa, ịmejọ na mmecha kwesịrị ịrụ site na iji akụrụngwa nwere arụmọrụ dị iche iche. N'ihi na usoro mmegide na-ebelata ọtụtụ akụkụ nke oghere ahụ, ihe eji arụ ọrụ ga-ewepụta nnukwu nrụgide dị n'ime mgbe nri buru ibu ma ebe miri emi buru ibu. N'oge a, enweghị ike ịmechaa. Mgbe arụchara ọrụ ahụ gwụchara na oge ụfọdụ, ọ ga-arụ ọrụ na igwe dị oke nkenke ka ihe nrụpụta ahụ wee nweta oke ziri ezi.
Nhazi nke nkenke akụkụ na-agụnyekarị ọgwụgwọ elu na ọgwụgwọ okpomọkụ. N'elu ọgwụgwọ kwesịrị enịm mgbe nkenke machining. Na na nkenke machining usoro, na ọkpụrụkpụ nke na mkpa oyi akwa mgbe n'elu ọgwụgwọ a ga-atụle. Okpomọkụ ọgwụgwọ bụ iji melite arụmọrụ nke metal, n'ihi ya, ọ dị mkpa ka a rụọ ya tupu ịkpụ. Ihe ndị a dị n'elu bụ ihe achọrọ iji soro na nhazi nke akụkụ ziri ezi.
Post oge: Mee-27-2020